Magac-bixinta Goobaha Ganacsi (Hoteelada) Ha Loo Meel Dayo. | Saxil News Network
Qormadan la magac baxday “ Magac-bixinta Goobaha Ganacsi (Hoteelada) Ha Loo Meel Dayo” waxa igu kalifay in aan qalin u qaato, markii aan arkay sida magac-bixintii ku arooreysay afkeena hooyo meesha uga sii baxayso. Wadamada waaweyn ee dunidu waxa ay dhaqaale iyo xayeysiisba ku bixiyaan sidii ay dunida kale u bari lahaayeen magacyada goobaha taariikhda iyo muhiimada u leh dalalkooda, halka innaga maal-qabeenkeeni jantay magac-bixin qalaad.
Tusaalahan hoose waxan idiinku soo bandhigayaa Hoteelada ugu mudan ee ku baahsan magaalooyinka dalkeena iyo sida ay uga aradan yihiin magac-bixin xero u dhalan ah oo dhaqan iyo hidoba ku fadhida:
Ambassador Hotell, Plaza Hotell, Crown Hotell, Royal Hotell, Summertime, Safari, Oriental, Titanic, City Center, Sun Hotell, Aloore Hotell, Jazeera Hotell, Global, Imperial, Obama, Eye-one, Star, Golden, Fish & Steak, Season, Lake Asal, Landmark, Royal lunch, Royal Plaza iyo qaar kale oo badan. Waxa iyana intaa dheer oo aafadan magac-bixintu asiibtay Carwooyinka, Dukaamada, Dugsiyada, Macxadyada, Malcaamadaha, Mac-macaanlayaasha iyo goob walba oo ganacsi oo dalkeena ah.
Haddii laga tegi waayo waxan xusuustaa dabayaaqadii sagaashameedayadii Hoteelka kaliya ee markii magaca loo bixinayey ummadda usoo bandhigay in ay kasoo teliyaan in uu ahaa Maansoor Hotell, intii ka dambeysay se ma arag cid muhiim u aragta in maga-bixintu muhiim u tahay guud ahaan dalka iyo gaar ahaan meheradaba.
Magac-bixinta soof-daran habowday kuma eka oo kaliya goobaha ganacsi ee waxay hore u sahayatay magac-bixintii caruurteena, dumarkeena waxa loo bixin jiray magac ku aroora afkeena hodanka ah.
Tusaale, goormaa kuugu dambaysay goor loo bixiyo hablaheena magacyadan:
Busaad, Barni, Batuun, Ceebla’, Cawrala’, Calowla’, Cudbi, Cutiya, Cambaro, Cosob, Ugbaad, Gobaad, Gob-deeq, Midhifla’, Saxarla’, Dahabo, Dulmar, Dhuuxo, Haweeya, Jinow, Qaafo, Qarad, Shaqlan, Ijo, Indhadeeq, Nadiifo, Milgo, Qorsho, Hufan, Xaabeeya, Xaadsan, Xaali, Xogla’, Hindisa, Hibo, Sagal, Weris, Mulaaxo, Jamaad, Maandeeq, Ugaaso. Maaantana magacyada kuwan sare ay ka doorteen hooyooyinkeeni qof wax kala garanaya loo sheegi maayo.
Waxan qormadeydan kusoo afmeerayaa ha loo meel dayno maga-bixinta.